ယူရို 2021 အမြန်ဆုံး update ခြေစစ်ပွဲရလဒ်များကိုကြည့်ပါ ။ - Beteuro2021
Posted on 22 April 2021 28 April 2021 by Khương Duy
ယူရို L အရည်အချင်းရလဒ်များကိုကြည့်ပါ ။ ယနေ့လူအများစိတ်ဝင်စားသောအကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ သို့သော်ယူရိုပြိုင်ပွဲ၏ရလဒ်များကိုလူအများက မည်သို့ကြည့်ရမည်ကို မသိကြပါ။ အားလုံး beteuro2021ဖြစ်လိမ့်မည် ေဖါ်ပြပါဆောင်းပါးအတိုငက်းမျဝေပါ။. ကြည့်ကြရအောင်။
ယူရို 2021 အကြောင်း
ယူရို သို့မဟုတ် ဥရောပဘောလုံးချန်ပီယံအား ၄ နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ်ကျင်းပလေ့ရှိသည်။ ရာသီသစ်အတွက်ပြင်ဆင်သည့်အခါနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပရိသတ်များသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်စိတ်အားထက်သန်ပြီးစောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။
သို့သော် ၂၀၂၁ သည် အထူးယူရို ရာသီဖြစ်လိမ့်မည်။ အချိန်ဇယားအတိုင်းလိုက်နာခြင်းဖြင့် ၂၀၂၀ သည်ရာသီ၏နှစ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်, ယူရိုပြိုင်ဆိုင်မှုဇယားသည် ၂၀၂၁ တွင်ပြန်လည်အဆင့်မြှင့်တင်မည်ဖြစ်သည်။. ထို့အပြင်ပေါ်တူဂီသည်ပုံမှန်အားဖြင့် ၄ နှစ်အစား ၅ နှစ်ကြားချန်ပီယံကာကွယ်ရေအတွက်ဖြစ်လာသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ကျင်းပခဲ့သော်လည်းဤပြိုင်ပွဲ၏နှစ် ၆၀ ပြည့်အခမ်းအနားကျင်းပရန်အတွက်ယူရို ၂၀၂၀ ကိုခေါ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ယခုရာသီသည်ဥပဒေအရအနည်းငယ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအနည်းငယ်သာရှိသော်လည်း၎င်းသည်ပရိသတ်များအတွက်အံ့အားသင့်စရာများစွာဖြစ်စေသောအလားအလာရှိသောရာသီဖြစ်လိမ့်မည်။
ပရိသတ်အတော်များများဟာယူရိုအရည်အချင်းပြည့်မှီတဲ့ရလဒ်တွေဘယ်လောက်မြန်တယ်၊ တိကျတယ်ဆိုတာကိုသူတို့မသိဘူးလို့တွေးမိကြပါတယ်။ တကယ်တော့, ယူရိုရလဒ်များကိုအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ အင်တာနက်ကို ၀ င်ပြီးသင်ရှာဖွေလိုသည့်သော့ချက်စာလုံးကိုသာရိုက်ထည့်ရန်လိုအပ်သည်။ ၃ စက္ကန့်ခန့်စောင့်ဆိုင်းပြီးနောက်ရလဒ်များသင့်ဆီသို့ပြန်လာလိမ့်မည်။
ရာသီတစ်ခုစီစတိုင်း ယူရိုခြေစစ်ပွဲရလဒ်များသည်လူတိုင်း၏အာရုံစူးစိုက်မှုအမြဲတမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီနေရာတွင်ခြေစစ်ပွဲဇယားဖြစ်သည် သင်လိုက်ကြည့်ရန်သာလိုမှာဖြစ်ပါတယ်။
Group A (စနေနေ့ ၂၃/၃)
ပွဲချိန်ပြည့်။ ဘူဂေးရီးယား 1 – 1 မွန်တီနီဂရိုး
ပွဲချိန်ပြည့်။ အင်္ဂလန်5–0ချက်သမ္မတနိုင်ငံ
ပွဲချိန်ပြည့်။ မွန်တီနီဂရိုး 1 –5အင်္ဂလန်
ပွဲချိန်ပြည့်။ ကိုဆိုဗို 1 – 1 ဘူဂေးရီးယား
ပွဲချိန်ပြည့်။ မွန်တီနီဂရိုး 1 – 1 ကိုဆိုဗို
ပွဲချိန်ပြည့်။ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ2– 1 ဘူဂေးရီးယား
ပွဲချိန်ပြည့်။ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ3–0မွန်တီနီဂရိုး
ပွဲချိန်ပြည့်။ ဘူဂေးရီးယား2–3ကိုဆိုဗို
ပွဲချိန်ပြည့်။ ကိုဆိုဗို2– 1 ချက်သမ္မတနိုင်ငံ
ပွဲချိန်ပြည့်။ အင်္ဂလန်4–0ဘူဂေးရီးယား
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 11/9 ရက်နေ့တွင်
ပွဲချိန်ပြည့်။ မွန်တီနီဂရိုး0–3ချက်သမ္မတနိုင်ငံ
ပွဲချိန်ပြည့်။ အင်္ဂလန်5–3ကိုဆိုဗို
ပွဲချိန်ပြည့်။ မွန်တီနီဂရိုး0–0ဘူဂေးရီးယား
ပွဲချိန်ပြည့်။ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ2– 1 အင်္ဂလန်
ပွဲချိန်ပြည့်။ ကိုဆိုဗို2–0မွန်တီနီဂရိုး
ပွဲချိန်ပြည့်။ ဘူဂေးရီးယား0–6အင်္ဂလန်
ပွဲချိန်ပြည့်။ အင်္ဂလန်7–0မွန်တီနီဂရိုး
ပွဲချိန်ပြည့်။ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ2– 1 ကိုဆိုဗို
ပွဲချိန်ပြည့်။ ကိုဆိုဗို0–4အင်္ဂလန်
ပွဲချိန်ပြည့်။ ဘူဂေးရီးယား 1 –0ချက်သမ္မတနိုင်ငံ
အုပ်စု B (စနေနေ့ ၂၃/၃)
ပွဲချိန်ပြည့်။ ပေါ်တူဂီ0–0ယူကရိန်း
ပွဲချိန်ပြည့်။ လူဇင်ဘတ်2– 1 လစ်သူယေးနီးယား
ပွဲချိန်ပြည့်။ ပေါ်တူဂီ 1 – 1 ဆားဘီးယား
ပွဲချိန်ပြည့်။ လူဇင်ဘတ် 1 –2ယူကရိန်း
ပွဲချိန်ပြည့်။ ယူကရိန်း5–0ဆားဘီးယား
ပွဲချိန်ပြည့်။ လစ်သူယေးနီးယား 1 – 1 လူဇင်ဘတ်
ပွဲချိန်ပြည့်။ ယူကရိန်း 1 –0လူဇင်ဘတ်
ပွဲချိန်ပြည့်။ ဆားဘီးယား4– 1 လစ်သူယေးနီးယား
ပွဲချိန်ပြည့်။ လစ်သူယေးနီးယား0–3ယူကရိန်း
ပွဲချိန်ပြည့်။ ဆားဘီးယား0–3ပေါ်တူဂီ
ပွဲချိန်ပြည့်။ လူဇင်ဘတ် 1 –3ဆားဘီးယား
ပွဲချိန်ပြည့်။ လစ်သူယေးနီးယား 1 –5ပေါ်တူဂီ
ပွဲချိန်ပြည့်။ ယူကရိန်း2–0လစ်သူယေးနီးယား
ပွဲချိန်ပြည့်။ ပေါ်တူဂီ3–0လူဇင်ဘတ်
ပွဲချိန်ပြည့်။ ယူကရိန်း2– 1 ပေါ်တူဂီ
ပွဲချိန်ပြည့်။ လစ်သူယေးနီးယား 1 –2ဆားဘီးယား
ပွဲချိန်ပြည့်။ ဆားဘီးယား3–2လူဇင်ဘတ်
ပွဲချိန်ပြည့်။ ပေါ်တူဂီ6–0လစ်သူယေးနီးယား
ပွဲချိန်ပြည့်။ ဆားဘီးယား2–2ယူကရိန်း
ပွဲချိန်ပြည့်။ လူဇင်ဘတ်0–2ပေါ်တူဂီ
အထက်ဖော်ပြပါသည်နောက်ဆုံးပေါ်ယူရို ၂၀၂၁ ခြေစစ်ပွဲရလဒ်ဇယားဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည်သင့်အားအသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များစွာကိုဖတ်ရန်သင့်အားပို့ဆောင်ပေးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ယူရို ၂၀၂၁ ရာသီတွင်အသင်းနှင့်အမြဲတမ်းလိုက်ပါပါ။
ကြည့်ပါ: UEFA Final team
ဥရောပ၌ အကောင်းဆုံးသော အွန်လိုင်းလောင်းကစားခြင်း